म जीवित हुँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुंगियोस् भन्ने बाहेक मेरो चाहना अरु के हुन सक्छ र ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असोज ९, २०७६ बिहिबार २१:१४:३६ | प्रचण्ड
गएको १२ वर्षयता म हिजोको विद्रोही नेताको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको एउटा जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगोमा पुर्‍याउन लागिरहेको छु ।
राजनीतिक पार्टीहरु हिजो युद्धरत रहँदा एकअर्काका विरोधमा जे जस्ता भाषा शैली र व्यवहार प्रयोग भएको थियो त्यसको अवशेष नजानु, एकले अर्कालाई होच्याउन खोज्नु, एकले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति नहुनु हो । के कति भएन ? तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो भने अहिले सबै त भन्न सक्दिनँ तर हो त्यही ।
मैले सँधै भन्दै आएको पनि छु हिजो माओवादी जनयुद्दको सम्पूर्ण राम्रा र नराम्रा कुराको जिम्मा मैले लिन्छु । म जुनसुकै ठाउँमा जनुयुद्धमा भएका राम्रा वा नराम्रा कामको नैतिक र व्यवहारिक राजनीतिक जिम्मेवारी लिन्छु । म मोर्चा छाडेर भाग्दिनँ । म तपाईँहरुको हितमा लड्ने प्रक्रिया छोडेर (जस्तो कयौँ साथीहरु कता–कता जानु भो) म भागेको छैन । म तपाईँहरुकै मोर्चामा आफ्नो ढंगले डटेर लडिराखेको छु । र म अन्तिम समयसम्म यो पक्षमा लडिराख्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरुसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु । म दोषी छु भने म त्यसको निम्ति जिम्मेवार हुनु पर्ने हुन्छ । इतिहासले, राजनीतिक घटनाक्रमले, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्तले, शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न तयार छु ।
इतिहासले, राजनीतिक घटनाक्रमले, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्तले, शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न तयार छु ।
त्यसकारण तपाईँहरुले बेलाबेलामा मसँग कहिले बाउ भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ, कहिले विलासी जीवन बिताउन थाल्यो यसले भनेर भन्नु भाछ । अहिले पनि भन्नुभयो । सत्ताको निम्ति लुछाचुँडी गर्न थाल्यो । होइन साथी, त्यो सत्य होइन । मैले तपाईँहरुको पक्षमा लड्न छोडेँ भने तपाईँहरु अझ ठूलो आक्रोश पोख्नुहुन्छ । कतिपयले ठूलै विस्फोट नै हुने कुरा गर्नु होला । तर अहिले बेला आएको छैन ।
संविधान बनाउँदै गर्दा पनि मैले तपाईँहरु सबैलाई रातदिन सम्झेको थिएँ । सबै घाइतेहरुलाई, सबै योद्धाहरुलाई, सबै बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुलाई सम्झेको थिएँ ।
तपाईँहरु गम्भीर भएर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ । मलाई यो प्रक्रिया टुग्याउने चिन्ता र त्यसका लागि पार्टीसँगको संवाद, आयोगहरुसँगको संवाद, वा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संवाद बाहेक मैले अर्को कुनै जीवनको कल्पना, अर्को कुनै कामको कल्पना गर्नै सक्दिनँ ।
राजनीति भनेको बडो निर्मम चिज हो । बडो निर्मोहि चिज पनि हो । त्यो विग्रियो भने त्यो धेरै लथालिंग हुन सक्छ । त्यो धेरै निष्ठूरी भएर निस्कन पनि सक्छ ।
मैले संविधान बनाउँदै गर्दा पनि तपाईँहरु सबैलाई रातदिन सम्झेको छु । सबै घाइतेहरुलाई, सबै योद्धाहरुलाई, सबै बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुलाई सम्झेको छु मैले । तपाईँहरुको उपचार, सुरक्षा र जीविकाका लागि मैले पछि हटेर भए पनि मैले गणतन्त्र संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउनअघि बढेँ । तपाईँहरुले सम्झिनुभएको होला । तपाईँहरुलाई लाग्छ होला, प्रचण्डले आफ्नै लागि गर्यो होला । प्रचण्डलाई हिजो जातिविधि नै मान्ने र अहिले जातिविधि नै नमान्ने गर्यो भने त्यो कुराको तालमेल मिल्दैन ।
बाँकी रहेका कामहरु पनि जो आफैमा धेरै महत्वपूर्ण र धेरै नै संवेदनशील छन् । त्यसलाई टुंग्याउने अन्तिम विन्दुमा हामी छौँ । यो अन्तिम कडी पनि हामीले सकारात्मक रुपमा टुंग्यायौँ भने हामी दुनियाँको अगाडि नेपालबाट लोकतान्त्रीकरणको रुपान्तरणको एउटा नयाँ मोडेल, शान्ति प्रक्रियाको नयाँ मोडेल पीडितहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर, अदालतको पनि सहयोग लिएर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई पनि मिलाएर यसरी टुंग्यायौँ भनेर हामीले छाती खोलेर भन्ने दिन आउँछ । त्यसकारण त्यति बेलासम्म हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने कोसिस गरौँ ।
–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको नेपालमा ‘संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अबको निकास के हुने ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।